Delhi bụ otu n'ime ihe anọ ahụ isi mepere obodo India. Na-ebi-amụba nọmba nke IT ụlọ ọrụ, ụlọ mmepụta ihe na, ụlọ ọrụ na anoghi n'ulo oba, Delhi pụta dị ka otu n'ime ndị isi izi na ọrụ n'ógbè nlekọta ọrụ. University of Delhi bụ ewu ewu nile India n'ihi na ya muta ụkpụrụ. Na osisi ule gburugburu akụkụ, ụmụ akwụkwọ si niile ná mba na-arụ ọrụ ike iji nọrọ ná nchebe mbanye n'ime otu n'ime ndị a kọleji.
Ọ bụrụ na ị bụ otu ndị dị otú ahụ na-amụrụ na-achọ ịlụ nabatara a mahadum ke National Capital, mgbe ahụ ị na-nri ebe. N'okpuru-depụtara ụfọdụ n'ime n'elu kọleji mmekọ na University of Delhi. Nke a bụ a otu nkwụsị ngwọta n'ihi na gị niile gbara ajụjụ dị ka ọmụmụ nyere, eligibility ibiere na ego Ọdịdị na ndị a na-ewu ewu kọleji nke Du.
A Christian College n'okpuru Church of North India, St. Stephen College bụ otu n'ime ndị kasị ochie kọleji nke North India. Guzosie Ike site Cambridge Mission ka Delhi, na mahadum awade a dịgasị iche iche nke N'okpuru-Ukpep na Post-Ukpep ọmụmụ:
B.Sc. Mmemme (Physical Science)
Na a ngụkọta nke 14 ngalaba, na mahadum ka mgbe e chọsiri. Cut offs dị elu dị ka 98% a kọrọ. Ọbụna omume dị ka B.A. ịkpụ offs gaa dị elu dị ka 97%. The mahadum nwere a na-amụrụ na-agba ọsọ a pụrụ isi chọta cell nke bụ ukwuu arụsi ọrụ ike na mgbe niile na-eme mgbalị kwupụta na-enye pụrụ isi chọta aka ka ụmụ akwụkwọ.
Banking na ego ndi oru na ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka The Lehman Brothers na Merrill Lynch, London nwere abuana ke mbanye usoro. Ọ bụrụ na ị na-aiming na-na nnabata na otu nke kọleji n'okpuru Du, mgbe St. Stephen bụ ọ bụla n'ụbọchị a ezi nhọrọ!
GỤỌ ỌZỌ: HOW TO IMPROVE YOUR GRADES IN COLLEGE?
Next in list is Ramjas College. Otu n'ime ndị mbụ atọ kọleji guzobere n'okpuru Delhi University, Ramjas College bụ ihe ọzọ na-ewu ewu na mahadum n'okpuru Du. Ọ na-enye a dịgasị iche iche nke ọmụmụ sitere na site B.A. ka B.Sc. Popular n'okpuru-gụsịrị akwụkwọ na post-gụsịrị akwụkwọ na ọmụmụ awa site na mahadum na- :
B.Sc (Hons) anụmanụ
B.Sc. (Mmemme) Physical Sciences
E wezụga n'elu depụtara ọmụmụ na mahadum na-enye nna ukwu nke Arts na Bengali, English, Hindi, Philosophy, Sanskrit, Economics, History, Political Science, Music na arụmọrụ Research. Master nke Science na Physics, Chemistry, anụmanụ Botany. Mathematics, Statistics na arụmọrụ Research bụ ihe ọzọ na-ewu ewu nhọrọ maka ịbata. E wezụga ihe ndị a niile, na ulo akwukwo na-awade a ruo n'ókè na nna ukwu nke Commerce.
Na a ukwuu n'ọrụ pụrụ isi chọta cell aha ya bụ 'n'ọtụtụ kasị elu', na mahadum mgbe gbalịrị ya kacha mma na-enye ọrụ aka ya Alumni. Ịhazi nzukọ ọmụmụ, tupu a pụrụ isi chọta okwu, mock Ajụjụ ọnụ sessions maka ụmụ akwụkwọ ụfọdụ na-eme ihe a haziri ahazi nke a pụrụ isi chọta cell.
Cut offs ndidi nnọọ elu maka Ramjas College kwa dị ka ndị ọzọ kọleji n'okpuru Du. A na-amụrụ ichebe karịa 96% akara na osisi nnyocha ga-enwe ike iji nwetara mbanye na nke a nọ n'ọkwá dị elu na mahadum nke Du. Ya mere ụmụ akwụkwọ, sere gị sọks elu na ọgụ mbadamba na a ọhụụ ka e meere mbanye ebe a!
Next na ndepụta bụ Shri Ram College of Commerce! Tupu mgbe maara dị ka 'Commercial College’ SRCC bụ IIT maka azụmahịa ụmụ akwụkwọ. na 304 ịga nke ọma eru kọrọ n'afọ 2016, na mahadum nwere nnọọ ọrụ pụrụ isi chọta cell. The mahadum awade a dịgasị iche iche nke ọmụmụ sitere na site B.Com (Hons.) ka B.A (Hons) na Economics.
GỤỌ ỌZỌ: How to Earn A College Degree Online ?
The zuru ndepụta nke ọmụmụ awa site SRCC bụ dị ka ndị :
P.G. Ubre G.B.O
na 2017, ịkpụ offs nọ nso 95% – 97%.
SRCC si akụrụngwa na-ekwukarị ka dakọtara mba ụkpụrụ! The Government of Delhi ka ghọtara campus dị ka otu n'ime ihe-nketa ụlọ nke National Capital! Otu n'ime iche atụmatụ nke SRCC bụ ya 'Global Business Operations’ unit.
SRCC kemgbe akpa oke nke osisi ule toppers. Ọ na-e nzute na-amụrụ na-atụ anya kemgbe nnọọ ogologo oge na ga-anọgide na-eme nke ahụ n'ọdịnihu kwa.
Hindu College bụ ihe ọzọ na-ewu ewu na mahadum n'okpuru University of Delhi. Ọ e ọdịda A + ọkwa ke akpa okirikiri grading site NAAC.
Na ịkpụ offs sitere dị elu dị ka 98%, ọ bụ otu n'ime ndị toughest kọleji-esi banye! The mahadum awade ọmụmụ na Humanities, Sciences, Commerce and Social Sciences. na 16 ngalaba sitere na site English ka Chemistry, na mahadum awade a dịgasị iche iche nke ọmụmụ :
Ikpeazụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, Hindu College bụkwa dokwara ọma ma na-achọsi. Na a ukwuu n'ọrụ pụrụ isi chọta cell, ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ebe a nwere nwetara ha nrọ ọrụ.
Ndị a bụ ụfọdụ nke ọwọrọiso kọleji n'okpuru University of Delhi. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị na-ada ga-esi n'ime otu n'ime ndị a kọleji, adịghị na-wutere! E nwere ọtụtụ ndị ọzọ na kọleji na-dokwara ọma mgbe ọ na-abịa eru na ndị ọzọ na-amụrụ ụlọ ọrụ.
« World AIDS Day – December 1, 2017 : edemede, isiokwu, slogans, Quotes, ozi, Olee otú Agba, Speech
Sridevi edemede, biography, Profaịlụ, Family, Super-hit Movies, onwu (Shridevi Bollywood nkiri) »